प्रधानमन्त्री ओलीले साढे ३ बजे देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। सोमबार दिउँसो साढे तीन बजे बालुवाटारबाट ओलीले सम्बोधन गर्न लागेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। कोभिड-१९ संक्रमण र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ओलीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। आइतवारमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भनेर वैशाख २७ लाई प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन…
स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि सरह दण्डनीय : प्रधानमन्त्री
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट उनले अपराह्न ४ः०० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजनले गर्ने भएकाे छ । The post प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
राजधानी दैनिक 22 दिन पहिले
प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले ४ बजे राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। आसन्न बजेटको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेट १५ गते बजेट ल्याउने छ। यही जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी छ।
ओलीले मास्क लगाएरै गरे देशवासीको नाममा सम्बोधन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सोमबार सरकारी टेलिभिजनमार्फत भएको देशवासीको सम्बोधनमा उनले मास्क लगाएरै सम्बोधन गरे । जनतालाई मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने सचेतना जगाउन उनले मास्क लगाएरै सम्बोधन गरेको बुझिएको छ । यसअघि सार्वजनिक भाषण र अन्तरवार्ताहरुमा ओलीले मास्क लगाएको देखिँदैनथ्यो ।
खोप लगाउनेमा दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपाल हो : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनेमा दक्षिण एसियामै भारतपछि नेपाल रहेको बताएका छन्। आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘२१ लाखलाई पहिलो खोप लगाइसकिएको छ, दोस्रो डोज लगाइँदैछ। कोभ्याक्सबाट खोप उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ।’ महामारीका कारण कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले आज साढे ३ बजे सम्बोधन गर्न लागेको उनका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापाले बताए । ओलीले समसामयिक विषय र कोभिड–१९ को सन्दर्भमा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले ओलीले राष्ट्रको नाममा आज सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दैछन्। आज दिउँसो ३:३० बजे राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गर्न लागेको बताइएको छ। हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको अवसरमा देशको नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि बिहान ८ बजे सम्बोधन गर्ने तयारी भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन् । नयाँ वर्षको शुभकामना दिने साथै काेराेना संक्रमणकाे दाेस्राे लहर फैलिएकाे सन्दर्भमा उनले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । The post प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने appeared first on Purbeli News.
प्रधानमन्त्री ओलीले आज राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध चर्को आवाज उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उहाँले पहिलोपटक राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो । दिउँसो एक बजे बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पनि जानकारी गराउने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६र७७ सभामा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजित बनेको छ । नियमसंगत पार्टी विभाजन नभएको भए पनि दुई समूह छुट्टाछुट्टै पार्टी सरह गतिविधिमा लागेका छन् ।